Kufamba bhegi bhodhi, rinozivikanwawo seHuman billboards advertising, ndiyo inodhura zvakanyanya uye inokwanisika nzira dzekushambadzira.Chinhu chakakosha ndechekuti graphic yakadhindwa pane vinyl inonamira kune foam board, kwete jira.Zviri nyore kugadzira kana kutsiviwa nemutengo wakaderera.
Iyi bhegi yekushambadzira haina maoko-isina, yakareruka uye inotakurika, 59x 42cm bhodhi inosimudzwa pamusoro pemusoro, inoratidza inoshanduka poster kumberi nekumashure, simbisa kuti munhu wese anogona kuona yako yakasarudzika meseji, yakanakira kukwidziridzwa kwenguva pfupi.
Chiedza-huremu chakaumbwa 3D-foam kumashure pani ine cushion uye mhepo inoyerera chiteshi dhizaini, Straps inogadziriswa, aya anovimbisa kuti anopfeka akasununguka;iva nehomwe yeparutivi uye yekumashure yekubata chinwiwa kana mapepa ekushambadzira, uchisiya mupfeki nemaoko emahara.
Yakareruka uye yakasimba aluminium pole sechimiro, kureba kwepango kwakafanana nebhegi, rakarongedzwa mubhokisi rimwechete.
Graphic inogona kubviswa nyore nyore kana kutsiviwa, Saizi yekudhinda: H59 x W42cm sezvataurwa.
Ichi chiratidziro chebhegi rebhegi remunhu chishandiso chinoshanda chekushambadzira kuti uonekwe brand nenzira inokwanisika.
(1) Chiedza-huremu chakaumbwa 3D-furo kumashure pani ine cushion uye inobvumira kuyerera kwemhepo dhizaini dhizaini, inopa yakasununguka kushandisa ruzivo.
(2) Imba ine zipper uye mamwe mahomwe anopa imwe nzvimbo yekusunungura maoko ako.
(3) Bhandi rinogadziriswa rinodzivirira bhegi kubva pakuzendamira shure mumhepo ine simba.
(4) Hook dhizaini pamabhandi emabhodhoro emvura
(5) Oxford zvinhu zvinoita kuti bhegi rinyanye kusimba uye kugara kwenguva refu kushandiswa.
Zvakapfuura: Indoor Ring Gate
Zvinotevera: Backpack Budget